5 Software seSevhisi Chibvumirano Matsotsi Ekudzivirira | Martech Zone
Sesangano rinotsigira zvizere vatengi vedu, isu tinotenga zvibvumirano zvekushandisa uye mapuratifomu zvakati wandei kuti titsigire zvakazara kuyedza kwevatengi vedu. Mazhinji eaya hukama ne Software somunhu Service (SaaS) vatengesi vanonakidza - tinogona kusaina online uye tinokwanisa kukanzura kana tapedza. Mugore rapfuura, zvakadaro, isu takanyatso kutorwa pazvibvumirano zvishoma. Pakupedzisira, kwaive kwakanaka kudhinda kana kutsausa kutengesa izvo zvakatungamira kwatiri kurasikirwa nemari yakati wandei. Ini handisi kuzodoma mazita pano, asi mamwe emakambani ane mukurumbira - saka chenjera. Makambani anoshandisa mukana wekubiridzira aya haazombowana bhizinesi rangu kana kurudziro yangu.
Minimum Chibvumirano Kureba - Software seSevhisi makambani ane account manejimendi uye onboarding maitiro anoshandisa mari yakawanda kuwana uye kuwana mutsva mutengi kumusoro uye kumhanya. IYI ROTI mari - vimba neni. Kushandira bhizinesi reESP munguva yakapfuura, tinogona kushandisa zviuru zvemadhora kuwana mutengi achitumira yavo yekutanga email. Nekuda kweizvozvo, kuda hushoma kontrakiti kureba kwaive kwakakosha kune hutano hwekambani Dambudziko nderekuti vazhinji vanozvishandira SaaS vafunga kuti vari kuzovanza hushoma kontrakiti kureba mumazita avo Kana iwe uchikwanisa kusaina ne kiredhiti kadhi uye wotanga kushandisa account yako nhasi, unofanira kukwanisa kukanzura account yako nhasi. Tarisa kumusoro kwakanaka. Isu takawana injini yeSEO yatakasainira uye hatina kurarama maererano nezvitarisirwa taive nemwedzi mitanhatu kontrakiti. Ndine chivimbo chekuti chinodikanwa chidiki chaingova nekuda kwekuti chikuva chavo chakanyanya-kuvimbiswa, pasi-kununurwa uye ivo vaingo nyomba vatengi kuti vawane imwe mari.
Saina Nhasi, Bill Mangwana - Wako SaaS mutengesi anomiririra ishamwari yako yepamwoyo kusvika wavhara. Pane rimwe izwi rekuti a kutengesa kuvimbisa izvo hazvina kunyorwa muchibvumirano. Inonzi a manyepo. Takasaina chibvumirano chegore negore nemutengesi mukuru wepuratifomu mukupera kwegore rapfuura. Iye wekutengesa anga ari pasi pesimba rekumanikidzwa uye aida kuwana iko kwekuvhara pasi petambo kwegore saka akativimbisa kuti havangabhadhare kusvikira tatanga kushandisa chikuva. Kana ini ndisina kubhadhara bhiri nekukasira, yakatumirwa kuunganidzwa. Iye zvino kambani yekuunganidza iri kutishungurudza. Kusvikira nhasi, handisati ndamboshandisa chikuva uye ini handisi kubhadhara bhiri. Vanogona kumhan'ara kana vachida. Ndichava nechokwadi chekuti vanoshandisa yakawanda mumabhiri epamutemo kupfuura kare kuwana dhora kubva kwandiri.
Agency Mapakeji - Kambani yandaive nehukama neni yakandikurudzira makore mashoma apfuura kuti ndisaine chibvumirano chevamiririri navo. Pasi pesangano rekambani, taibhadhara mari shoma pamwedzi uyezve a pamutengi yakadzikiswa pamwedzi pamubhadharo we ~ ~ 75% yemutengo wekutengesa Iyo agency package yakatigonesa kuwana rutsigiro rwekutanga, kuzara kuzere kune zvese maficha, chigaro pakomiti yezano yezvigadzirwa, uye kunyoreswa seanogamuchirwa agency panzvimbo yavo. Zvainzwika sechibvumirano chakakwana - kudzamara taverenga kuti isu taifanira kupa zana% yerutsigiro kune vatengi vedu. Folks - ndipo apo zvese zvinodhura vari! Ndingadai ndakafanirwa kusaina akawanda emakasitoma kuti ndikwanise kuwana vakazvipira vanotsigira vashandi uye ndichiri kubatsirwa kubva kuhukama. Ticharamba tichiendesa vatengi kumupi uyu, asi isu hatimbofi takasaina mapepa emumiririri.
Usage uye Overage Fees - Makambani makuru esoftware ari pachena kwazvo pamusoro pemari yekushandisa - kunyanya kana zvasvika kune kuwedzera mari. Isu tinoda mhando senge Amazon inobhadharisa kushandiswa uye kudzikisira iyo huru yaunoshandisa mapuratifomu avo. Makambani akaita Circupress zvinokufambisa zvakanaka kumusoro kana pasi pachibvumirano chako zvichienderana nenhamba yezvinyorwa uye maemail auri kutumira. Paunonyanya kutumira, iwo wakaderera mutengo pakutumira.Mamwe makambani anokuranga iwe kuti ushandise.Takatoshamiswa apo HUGE inbound yekushambadzira chikuva yakatizivisa kuti ivo vaipetwa zvakapetwa mutengo wedu patakatenga vese vedu vekutaurirana navo system - chimwe chinhu chisiri. yakakurukurwa mukutengesa maitiro (zvakaburitswa saiti yavo asi isu takazvikanganwa). Mamwe makambani anobhadharisa premium kana iwe ukaenda pamusoro pekushandisa kwako kwakatemwa sisitimu yavo (bandwidth, maakaundi, maemail, mishandirapamwe, nezvimwewo). Ive neshuwa kuti mashandisirwo uye yekuwedzeredza fizi inoenderana nekudzoka kwako mukudyara uye chaizvo inokurudzira kushandiswa kwesisitimu pane kuodza moyo kushandiswa.
Auto-kumutsidzira - Ini handikwanise kukuudza kangani ndakabvarurwa nemakambani andinyoresa nawo kuti ndiedze software yavo, ndakaikanzura, uyezve mwedzi unotevera ndakabhadhariswa zvakare. Izvo hazvina basa kuti saizi yakakura sei kambani, izvi zvakaitika kwandiri nezvidiki zvekuita uye zvakakurisa. Tsvaga pamberi penguva kana zvibvumirano zvakagadziridzwa otomatiki uye ita shuwa kuti kambani inoda mvumo yako usati wavandudzwa kana kuenda kumberi kana usina hurongwa hwekuvandudza patsva.
Zvibvumirano, Mitemo yeSevhisi uye Mitemo Yekubhadhara zvakakosha kuti unzwisise hukama hwako nemutengesi. Tsvaga kuti chii chinoitika kubvumirano yako uye hukama nemutengesi kana kambani yako ikamhanya mune idzi nyaya:
Cancellation - hauchadi kana kugona kutenga Saas chikuva. Makambani ekuzvishandira anowanzo kupa ziviso yemazuva makumi matatu kana kunyangwe kukanzurwa nekukurumidza pachikuva chavo. Ngwarira kambani yaunosaina online nekadhi rechikwereti asi unofanirwa kufona kuti umise account yako. Zviri nyore chete kumisa kubhadharisa pamhepo sezvo zviri nyore kuzvitanga! Kune makambani ane onboarding, kubvunza uye rutsigiro, mashoma zvibvumirano zvemwedzi mitanhatu kana zvakadaro zvakajairika.
Usage - Unogona kushandura mashandisirwo zvakanyanya - kungave kuwedzera kana kuderera. Iwe unofanirwa kudzikisirwa nekuda kwekusashandisa kana kushomeka kwekushandisa kwesisitimu uye haufanire kurangwa nekushandisa kwakanyanya kweSoftware chikuva. Mitengo inofanirwa kugadzirisirwa kushandiswa uye kudzoka kwako mukudyara kunofanira kuwedzera sezvaunoshandisa system zvakanyanya.
Kuve negweta pawakagadzirira ndiyo inogara iri zano rakanakisa! Nguva zhinji dzatakatorerwa zvaingove nekuti hatina kupfuudza kondirakiti nemagweta edu akanaka Kuzivisa Castor Hewitt.
Tags: rezinesi rekubatsiraagency agency mitengoBillingmazwi ekubhadharachibvumirano chekubiridzirazvibvumiranomutengo pamari yekuwedzeredzasaassoftware sebasakushandiswa kwesoftwaremashoko ekushandiswamari dzevadiki